Dzimwe LG TV kubva muna 2019 dzatove neApple TV iripo | Ndinobva mac
Dzimwe 2019 LG TV dzatove neApple TV iripo
Iyo Apple TV application ichave ichiuya kune idzi LG terevhizheni kwemaawa mashoma uye kunyangwe isiri kusvika kune ese mamodheru avanayo mukatalog yavo uye yaisazosvika nyika dzese panguva imwe chete, kuwedzera kweApple TV app pane maTV e2019 eiyi firm yatove chokwadi.
Isu tanga tiine nhau nezve ino app kwenguva yakareba pane LG terevhizheni uye mune ino kesi zvingave zvatove inowanikwa muUnited States nedzimwe nyika makumi masere zvimwe, hongu, iri kusvika zvishoma nezvishoma saka kana uri mushandisi we LG terevhizheni ye2019, tarisa kuti uone kuti yave kuwanikwa izvozvi.
Iyi CES yeLas Vegas 2020 yakatoratidza materevhizheni ese ekambani yeKorea neiyi Apple application yakaiswa, saka kuwedzera kuri kuita sekunyevera kwatakaita mwedzi mishoma yapfuura pakauya Apple TV yeterevhizheni. Ehezve, materevhizheni anotsigira aplicaciónApple TV application iwo zvakare anowirirana neAirPlay 2, Kubvumira vashandisi kugovana kana girazi zvirimo kubva ku iPhone, iPad kana Mac zvakananga.
Saka kubvira nanhasi maTV e2019 uye NanoCell TVs (SM9X uye SM8X akateedzana) ndiwo anowedzerwa pane ino runyorwa neanowanikwa Apple TV app. Iyo femu pachayo inotsanangurira vezvenhau kuti gare gare chikumbiro Apple TV chichaitwa zvakare mune mamwe UHD UM7X uye UM6X modhi saka izvi hazvimire. Zvine musoro Apple app ichave ichiwanikwa pane 2020 mamodheru pakuvhurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Dzimwe 2019 LG TV dzatove neApple TV iripo
Mari-isina mubhadharo mari ichiripo kubva kuApple
Turera nyowani yeMythic Quest: Raven's Banquet, pamberi pekutanga kwayo